Ihiepu nke Sony Xperia L3 na-ekpughe ihe mmetụta mkpịsị aka n'akụkụ ya na igwefoto abụọ | Gam akporosis
Sony Xperia L3 ihihi ekpughe akụkụ mkpisiaka ihe mmetụta na sọrọ igwefoto
N'ime afọ a CES, Sony malitere Xperia L2 na Xperia XA2 na XA2 Ultra. Taa, ekele maka ntanye nke akaụntụ Twitter OnLeaks, anyị nwere mbụ lee anya na Xperia L3, a mobile igwe na-ga-abịarute mgbe na-abịa ọnwa ole na ole.
Isi iyi nke ehi ehi ahụ egosila na Xperia L3 ga - egosipụta a 5.7-anụ ọhịa ihuenyo na HD + mkpebi na akụkụ nke 18: 9. Ọzọkwa, akụkụ dị iche iche bụ 153.8 x 71.9 x 9mm.
Amabeghị atụmatụ nke Xperia L3, mana ebe nrụọrụ weebụ Pricebaba, yana njikọ nke mbụ, mepụtara ọtụtụ nsụgharị na vidiyo na-egosi anyị ụdị atụmatụ nke Xperia L3. gbaa gburugburu na akụkụ nkuku.
Ngwaọrụ ahụ nwere nnukwu bezels dị n'elu na ala - yana akara ụlọ ọrụ na bezel dị n'okpuru - mana obere bezels n'akụkụ. N'elu ị ga-ahụ ọkà okwu maka oku, igwefoto na ụfọdụ ihe mmetụta.
Banyere njikọ ndị ahụ, na akụkụ ala, anyị na-ahụ ọkà okwu, igwe okwu na ọdụ ụgbọ USB-C, ọdụ ụgbọ mmiri jaket 3.5mm dị n'elu. N’akụkụ aka nri anyị na-ahụ bọtịnụ ike, bọtịnụ olu na ihe mmetụta mkpịsị aka. Na azụ e nwere ihe mejupụtara igwefoto abụọ na ọkụ ọkụ ọkụ, na mgbakwunye na akara ngosi oge ochie nke ụlọ ọrụ ahụ na usoro ahụ.
Na teknụzụ data ọ dịghị ihe ọ bụla, ọ bụ ezie na ịnwe ọnụ ala, ngwaọrụ nwere ike iburu Mediatek nhaziDika onye bu ya uzo, enwere ike isoro ya 4 GB nke RAM na 64 GB nke nchekwa di n’ime.
Anyị amaghị ole Sony Xperia L3 ga-ahapụ, mana ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ eziokwu na ga-apụta tupu ọnwa disemba ịbụ nhọrọ nzụta na ngwụcha afọ otu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Sony Xperia L3 ihihi ekpughe akụkụ mkpisiaka ihe mmetụta na sọrọ igwefoto
Etu esi bulite egwu na Google Play Music
Kwenyesiri ike na njedebe ikpeazụ nke OnePlus 6T na onyonyo ya